ॐ अस्पतालको लापरवाही कहिले सम्म ? पत्थरिको अपरेसन गर्न हाँस्दै गएकी अनिताको मृ*त्यु
September 22, 2019 by साहारा संदेश
चावहिलमा अवस्थित ॐ अस्पतालमा पत्थरीको अप्रेसन गरेकी एक महिलाको मृ*त्यु भएको छ । धादिङको गंगाजमुना गाउपालिकाकी २९ वर्षीया अनिता गुरूङको अस्पतालको गम्भीर लापरबाहीका कारण मृ*त्यु भएको हो ।
शुक्रवार दिउँसो हाँस्दै हिँडेर अस्पताल गएकी गुरूङको चिकित्सकहरूले शनिवार पत्थरी निकाल्न शल्यक्रिया गरेका थिए। शल्यक्रिया पछि गुरूङको अवस्था सामान्य भएको भन्दै वार्डमा सारिएको थियो ।
चिकित्सकले अवस्था सामान्य भनेको ६ घण्टा वित्न नपाउँदै उनको मृ*त्यु भएको मृतकका आफन्तले बताए । शल्यक्रिया पछि स्वास्थ्य भएको विरामीको मृ*त्युु भएपछि मृतकका आफन्तले अस्पतालको लापरबाहीले गुरूङको मृ*त्यु भएको आरोप लगाएका छन् ।
अस्पतालले भने बिरामीको मृ*त्यु अप्रेसनमा भएको लापरवाहीले नभइ हर्ट अट्याकका कारण भएको दाबी गरेका छन् । पत्थरीको सफल शल्यक्रिया भएको बताएका चिकित्सकले केही मुटु चल्न छाडेका कारण गुरुङको मृ*त्यु भएको जनाएपछि मृतकका आफन्त आन्दोलनमा उत्रिएका छन।
उनीहरुले चिकित्सकले उपचारमा लापरबाही गरेका कारण अप्रेसन सफल भए पनि गुरुङको ज्यान गएको आरोप लगाएका छन् । ॐ अस्पतालको यस्तो लापरवाहिको कुरा हामिले नसुनेका हैनौँ । कहिले के सुनिन्छ त कहिले के । मानिसको ज्यानको यति थोरै मुल्री किन ? प्रतिक्रिया दिनुहोला ।
Prevकेकि अधिकारी चडेको गाडिको दुर्घटना: यस्तो छ उनको अवस्था
Nextबिचरा मनोजको यति सानो उमेरमै यस्तो हालत भयो, समयमा उपचार नगरे दुबै खुट्टा काट्न पर्ने: सहयोगका लागि यहाँ थिच्नुहोस